Yusuf Garaad: Borame - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Siddeedaad
Marka laga soo tago saddexdaa magaalo ee jiho ahaan isugu beegan sida ku dhowaad xaglaha Saddex-xagal xagla-siman, ma fileyn in aan arki doono dhib kale oo weyn oo woqooyi ka jira oo colaaddu ay u sabab tahay.
Magaalada Borame culeyska saaran waxaa ka mid ah mid uga yimid ehel iyo qaraabo. Magaalda waxaa ku soo biiray barakacayaal ka soo qaxay Hargeysa iyo magaalooyin kale oo dagaalku dhulka dhigay. Ma ahan keliya dad asal ahaan ka soo jeeday Borame oo u soo gurya-noqday. Laakiin rayid badan oo degganaa Hargeysa, markii dagaalka fool-ka-foolka ahi uu ka billowday dad badani waxay u qaxeen magaalada weyn ee ugu dhow - Borame.
Hooyada barooraneysa, tan la aammusinayo, gabadha laga hortaagan yahay in ay indhaheeda saarto muuqaal la is leeyahay qalbigeedu ma xammili karo... Baroorta iyo catowga haweenka iyo waxa is qabsatay qeylada ka baxaysa ragga oo qaarkii uu amar bixinayo, ini ay dayac tilmaamayso, kuwo kale ay wax saxayaan, mid kale ila qabo leeyahay iyo waxyaabo la hal maala.
Posted by Yusuf Garaad at 11:02:00